SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kamba Kannada Kekchi Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
MAFUNGU egungwa reAtlantic zvaairova nesimba pangarava yaienda kuEurope, mumwe wevakanga varimo anonzi George Young, aigutsikana nebasa reUmambo raakanga aita muBrazil. * Pavakanga vachienderera mberi nerwendo rwavo, Hama Young vakatanga kufunga nezvekwavaienda. Vainoshanda kuSpain nePortugal kwaiva nenzvimbo dzakawanda dzainge dzisati dzamboparidzirwa. Pavaizosvika ikoko, vaida kuronga nezvehurukuro dzeBhaibheri dzaizopiwa naHama J. F. Rutherford uyewo kupa vanhu maturakiti 300 000!
George Young akafamba nemumakungwa munzendo dzake dzekuparidza
Pavakasvika muLisbon muna 1925, Hama Young vakawana zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kupanduka kwakanga kwaita vanhu muna 1910 kwakagumisa utongi hwaivapo uye chechi yeRoma yakasara isisina simba. Vanhu vakawedzera kuva nerusununguko, asi zvinhu zvakaramba zvisina kugadzikana munyika macho.
Hama Young pavakanga vachironga nezvehurukuro yaHama Rutherford, hurumende yakabva yaisa mutemo wekuti nyika itongwe nemasoja nekuti pane vaida kubvisa hurumende nechisimba. Munyori wesangano reBritish and Foreign Bible Society akayambira Hama Young kuti vaizopikiswa zvakasimba. Kunyange zvakadaro, Hama Young vakakumbira mvumo yekushandisa nzvimbo yekuitira maekisesaizi yepaCamões Secondary School, uye vakabvumirwa kuishandisa.
Musi wa13 May wakasvika. Iri ndiro zuva rakanga rakarongwa kuti Hama Rutherford vazopa hurukuro yavo. Vanhu vakanga vakamirira. Zvikwangwani zvaiva pazvivako uye mashoko akabudiswa mumapepanhau zvaitaura nezvemusoro wehurukuro yacho waiti: “Zvaungaita Kuti Urarame Panyika Nekusingaperi.” Vanhu veimwe chechi vaipikisa vakaita chimbichimbi kunyora mupepanhau ravo vachiyambira vaverengi vavo kuti vaprofita venhema vakanga vachangobva kusvika. Vanhu vaipikisa vakanga vari pamusuo penzvimbo yacho vachipa vanhu zviuru zvemabhuku aishora zvaidzidziswa naHama Rutherford.
Pasinei nezvese izvi vanhu vanenge 2 000 vakazadza nzvimbo yacho, uye vamwe vanenge 2 000 havana kuzokwanisa kupinda. Vamwe vaiteerera vari pamanera akanga ari mumativi enzvimbo yacho uye vamwe vainge vakagara pamichina yemaekisesaizi.
Pane zvimwe zvisina kufamba zvakanaka. Vanhu vaipikisa vaiita ruzha uye vairovera macheya pasi. Asi Hama Rutherford vakaramba vakadzikama uye vakakwira patafura kuti vanyatsonzwika. Pavakazopedza panenge pakati peusiku, vanhu vanopfuura 1 200 vaifarira vakanyoresa mazita avo nekero kuti vazotumirwa mabhuku anotsanangura Bhaibheri. Zuva rakatevera racho, pepanhau rainzi O Século rakabudisa nyaya yaitaura nezvehurukuro yaHama Rutherford.
Muna September 1925, Nharireyomurindi yemutauro wePortuguese yakatanga kubudiswa muPortugal. ( Yainge yatotanga kare kubudiswa muBrazil.) Panguva iyoyo, Virgílio Ferguson, mumwe Mudzidzi weBhaibheri wekuBrazil, akatanga kuronga kuti aende kuPortugal kuti anobatsira pabasa reUmambo. Ainge amboshanda naHama Young pabazi reVadzidzi veBhaibheri muBrazil. Pasina nguva Virgílio nemudzimai wake, Lizzie, vakaenda vakanobatana naHama Young zvakare. Hama Ferguson vakasvika panguva yakakodzera nekuti pasina nguva Hama Young vaizoenda kunoparidza kune dzimwe nzvimbo dzakadai seSoviet Union.
Pemiti yakapiwa Lizzie naVirgílio Ferguson, muna 1928 yekuti vagare muPortugal
Masoja paakabvisa hurumende yakanga iripo achibva aisa hurumende yeudzvinyiriri muPortugal, kupikiswa kwebasa redu kwakabva kwawedzera. Hama Ferguson vakaramba vari munyika macho uye vakatora matanho ekudzivirira boka diki reVadzidzi veBhaibheri uye vakavabatsira kuti vave neushingi pakuita basa ravo. Vakakumbira mvumo yekuti pamba pavo pagare pachiitirwa misangano. Vakabvumirwa muna October 1927.
Mugore rekutanga rehurumende yeudzvinyiriri, vanhu 450 vakanyoresa kuti vagare vachitumirwa Nharireyomurindi. Maturakiti nemabhuku zvakabatsirawo kuti chokwadi cheBhaibheri chipararire munyika dzaitongwa nePortugal dzakadai seAngola, Azores, Cape Verde, East Timor, Goa, Madeira, neMozambique.
Makore ekuma1920 ava kunopera, Manuel da Silva Jordão, murume wekuPortugal aishanda muyadhi, akauya kuLisbon. Paaigara muBrazil, akanga anzwa hurukuro yakapiwa naHama Young. Akanyatsoona kuti akanga awana chokwadi uye aida chaizvo kubatsira Hama Ferguson kuti vaparidze munzvimbo dzakawanda. Kuti aite izvi Manuel akatanga kushanda semucolporteur, zita raipiwa mapiyona panguva iyoyo. Sezvo kuprindwa uye kuendeswa kwemabhuku anotsanangura Bhaibheri kuungano kwainge kwarongeka, ungano itsva yaiva muLisbon yakasimba pakunamata.
Muna 1934, Hama naHanzvadzi Ferguson vaifanira kudzokera kuBrazil. Asi mbeu yechokwadi yakanga yadyarwa. Zvinhu pazvakanga zvisina kumira zvakanaka muEurope panguva yairwiwa hondo yevagari vemuSpain uye Hondo Yenyika II, hama dzaiva muPortugal dzakaramba dzakavimbika kuna Jehovha. Kwekanguva vakamboita semazimbe emoto, asi muna 1947 pakasvika mumishinari wekutanga ainge apinda Chikoro cheGiriyedhi ainzi John Cooke, hama dzacho dzakatanga kushingaira zvakare. Kubvira ipapo vazivisi veUmambo vakatanga kuwedzera. Kunyange hurumende payakarambidza basa reZvapupu zvaJehovha muna 1962, vaparidzi vakaramba vachingowedzera. Muna December 1974 Zvapupu zvaJehovha pazvakatanga kubvumirwa kunamata zviri pamutemo, munyika macho makanga mava nevaparidzi vanopfuura 13 000.
Iye zvino vaparidzi vanopfuura 50 000 vari kuparidza mashoko akanaka eUmambo hwaMwari muPortugal uye pazvimwe zvitsuwa zvakati kuti zvinotaurwa Portuguese, kusanganisira zvitsuwa zveAzores neMadeira. Vamwe vevaparidzi ava vazukuru vevamwe vakanzwa hurukuro yaHama Rutherford muna 1925.
Tinotenda Jehovha uye hama nehanzvadzi dzakatendeka dzakatungamirira neushingi kuti basa rifambire mberi ‘sevashandi vevanhu vese vaKristu Jesu kune mamwe marudzi.’—VaR. 15:15, 16.Kubva mudura renhoroondo yedu kuPortugal.
^ ndima 3 Ona nyaya yakanzi “Pane Basa Rakakura Rokukohwa Rinofanira Kuitwa” iri muNharireyomurindi, yaMay 15, 2014, peji 31-32.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kudyarwa Kwembeu Dzekutanga dzeUmambo muPortugal
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA August 2018
“Pane Basa Rakakura Rokukohwa Rinofanira Kuitwa”
Mutakuri Wechiedza Kumarudzi Akawanda
Takaona Mutsa Usina Kukodzera Kuwanwa waMwari Munzira Dzakawanda